Laser Laser miisa Fractional, fanesorana volo Laser Diode - Haidari
Laser efatra amin'ny iray CO2 dia safidy mety indrindra amin'ny sehatry ny kosmetolojia, fitsaboana ara-pahasalamana ary fandidiana. Amin'ny fampiasana lohany scanning marani-tsaina azo antoka, ny faritra fitsaboana dia afaka misafidy sary isan-karazany amin'ny fitsaboana amin'ny hoditra, hosodoko amin'ny hoditra, fanesorana ny mariky ny fitondrana vohoka, fanesorana melanina; fitsaboana lohalika fitsaboana gynecological vy tsy misy fangarony, manenjana ny fivaviana, vokarin'ny labia mihosotra dia mahatalanjona; Tanana fitaritana jiro iraisana 7, fihodinan'ny 360 °, atambatra amin'ny loha fanapahana 100 mm ho an'ny fandidiana laser; Ny laser nafarana avy any Etazonia dia manana hery maharitra sy androm-piainana maharitra.
Fractional Co2 Laser fivaviana fanamafisana laser M ...
1060nm 4 tahony Diode Laser Body endrika endrika lanja ...
Masinina fanesorana tatoazy Laser Picosecond